कपिल शर्मालाई ह्वीलचेयरमा देखिएपछि प्रशंसकमा बढ्यो चिन्ता ! « MNTVONLINE.COM
मुम्बई । भारतीय चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा ह्वीलचेयरमा बसेको तस्बीर अहिले भाइरल भैरहेको छ । शर्माको ह्वीलचेयरमा बसेको चस्बीर सार्वजनिक भएपछि समर्थकमा चिन्ता बढेको हो । अहिले ह्वीलचेयरमा बसेका कपिलको फोटोले प्रशंसकलाई हैरान बनाएको छ । वास्तवमा सोमवार कपिल एयरपोर्टबाट ह्वीलचेयरमा बसेर बाहिर निस्केको स्पट गरिएको छ ।
उनी एक जना स्टाफको सहयोगले ह्वीलचेयरमा बसेर बाहिर आउँदै गरेको देखिएको छ । उनको यस्तो फोटा देखेर सबै हैरान भएका छन् । मानिसका लागि कपिलको यो फोटोले धेरै प्रश्नहरु उत्पन्न गराएको छ ।
कपिललाई के भयो ? कपिल शोमा देखिएको छैन ? यही कारणले हो कि ? जस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अहिलेसम्म कपिल ह्वीलचेयरमा बस्नुको कारण थाहा भएको छैन । तर प्रशंसकहरु कपिलको फोटो हेरेर साह्रै चिन्तित भएका छन् ।
उनीहरुले ट्विट गर्दै के भयो कपिल जी ? तपाईंको ह्वीलचेयरमा बसेको फोटो देख्यौं, तपाईं ठीक हुनहुन्छ नी ? आफ्नो ख्याल राख्नु् होला । तपाईं हाम्रो लागि अमुल्य हुनुहुन्छ‘हाम्रो ज्यान हो तपाईं‘कृपया आफ्नो स्वास्थको केहि अपडेट दिने कोशिश गर्नु होला‘आदि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
किम र र्‍यापर कान्य सम्बन्ध विच्छेद गर्दै !
अनुराग कश्यपकी छोरी आलियालाई बलात्कारको धम्की !